ဆေးရုံဆင်းချိန်မှာ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
16 Aug 2018 . 12:28 PM
Myanmar Idol Season3ပွဲကြီးကတော့ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ စနေနေ့မှာ Grand Final ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ပွဲကသာ ပြီးသွားပေမယ့် လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ Finalist နှစ်ယောက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေ တိုက်ပွဲကတော့ ဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်လည်း မွေးရပ်မြေ ဟင်္သာတမြို့ကို ပြန်သွားပြီဖြစ်သလို ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတစ်ယောက်လည်း သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် မနေ့ကပဲ ဆေးရုံဆင်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို Myanmar Idol Season3ကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အတွက် အလုံးကြီးကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ Winner ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်း၊ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ အခုချိန်မှာ အသံအိုးထိထားလို့ ၁ လလောက်နားပြီး ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ခုလို ရေးထားခဲ့ပါတယ်။
“သမီးတို့ myanmar idol season3ကြီး အောင်အောင်မြင်မြင် နဲ့ ပီးဆုံးသွားပါပီ အရမ်းလဲပျော်ပါတယ် အလုံးကြီးတွေလဲကျသွားပါပီအကုန်လုံး
ဒါပေမဲ့ ၃ လလောက် ဒီထဲမှာပဲသီချင်းတိုက် ထမင်းစား
ပျော်ပါးခဲ့တော့ အခုကျတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီးဖြစ်ရပါတယ်
ကို Phyo Myat Aung congratulations ဗျာ winner ကြီး သမီးအရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလို့အရမ်းပျော်တယ်
ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ myanmar idol ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့
သမီးကိုလဲတကယ့်သမီးလေးလိုသဘောထားပီးဒီလိုတွေဆိုတတ်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ အရမ်းချစ်ရတဲ့ တီချယ် Tracy Yinmin Tin ရယ် ဆရာ Okka Oo Tha ရယ်ရော ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အရမ်းလဲချစ်ပါတယ်
ပီးတော့ ဒီ top 11 ကိုဆွဲခေါ်လာပေးကြပီးတော့ တပတ်နဲ့တပတ်သမီးရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေ အားသာချက်လေးတွေကို ဖြည်းဆီးပြောဆိုပေးတဲ့ ဒိုင်လေးဦးကိုလဲကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး
အစစအရာရာ ဖေးမကူညီပေးတဲ့ ကိုAndy , ကိုဆိုင်း , ကို pink , မေမေနှင်း ( Sky Hnin Hnin , ကိုသန့် ( U U Thomas Thomas . သမီးကိုလဲအပြောအဆိုအနေအထိုင်သင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကို ဇေ ( Zeyar Minthiha ) ကို Sai , မ Chu Chu May Kyaw , မ ကေ , မ လဲ့ , မသက်စု , ကို ဘုန်းမြတ်ကျော် အစရှိတဲ့ PD တွအကုန်လုံးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် သမီးကိုလှအောင် မိတ်ကပ်တွေပြင်ပေးတဲ့ ဦးမောင်တို့အဖွဲ့ရော သမီးစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်အဝတ်လေးတွေဆင်ပေးတဲ့ judson ရော ကိုဝေ ကိုရော ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
သမီးနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသက်သာအောင်ကုသပေးတဲ့ သူခကမ္ဘာဆေးရုံကဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့ ဆရာမကြီး Doc Thandar Cho နဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးကိုလဲကျေိးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သမီးကို နေရာတနေရာရောက်အောင် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကြီး ( မောင်တို့ ) ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
အများကြီးလဲချစ်ပါတယ် သမီးကတော့အခုချိန်မှာ အသံအိုးထိထားလို့ ဆရာဝန်ကတော့ ၁လ လောက်နားရမယ်ပြောပါတယ် ၁ လလောက်နားပီးတာနဲ့ သမီး fan meeting လေးလဲတက်နိုင်သလောက်လုပ်ပါ့မယ်
သမီးသီချင်းတွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ သီချင်းတွေများကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်
ဒါနဲ့ ဒီနေ့ပဲဆေးရုံဆင်းပါပီ နေကောင်းသွားပါပီ
ko Zaw Gyi ပါ )
say u won’t let go ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ ‘Say You Won’t Let Go’ ဆိုတဲ့ သီချင်းအပိုင်းအစလေးကို ကိုယ်တိုင်တီးဆိုပြီး Video လေးတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ဒီလင့်မှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ချမ်းမြေ့မောင်ချိုလေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူပြန်လာပြီး သီချင်းသစ်တွေ ဆက်လုပ်မယ့်အချိန်ကို စောင့်နေကြပါတယ်။ အမြန်ဆုံးနေကောင်းကျန်းမာပါစေ မောင်ချိုရေ။
Photo & Video Credit : Chanmyae Mg Cho’s Facebook Account & Kyaw Thet Htay
ဆေးရုံဆငျးခြိနျမှာ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုလိုကျတဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို
Myanmar Idol Season3ပှဲကွီးကတော့ သွဂုတျလ ၁၁ ရကျ၊ စနနေမှေ့ာ Grand Final ပှဲကွီးကငျြးပပွီးတော့ အောငျအောငျမွငျမွငျပွီးစီးသှားခဲ့ပါပွီ။ ပှဲကသာ ပွီးသှားပမေယျ့ လူမှုကှနျရကျမှာတော့ Finalist နှဈယောကျရဲ့ ပရိသတျတှေ တိုကျပှဲကတော့ ဆကျလကျပွငျးထနျခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ Winner ဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျဆှတျခူးသှားတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျလညျး မှေးရပျမွေ ဟင်ျသာတမွို့ကို ပွနျသှားပွီဖွဈသလို ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုတဈယောကျလညျး သွဂုတျလ ၁၅ ရကျ မနကေ့ပဲ ဆေးရုံဆငျးရပွီဖွဈပါတယျ။
ဒီလို Myanmar Idol Season3ကွီး ပွီးဆုံးသှားတဲ့ အတှကျ အလုံးကွီးကသြှားပွီဖွဈကွောငျး၊ Winner ဖွဈတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးသာကွောငျး၊ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးတငျကွောငျးနဲ့ အခုခြိနျမှာ အသံအိုးထိထားလို့ ၁ လလောကျနားပွီး ပွနျလာခဲ့ပါမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ခုလို ရေးထားခဲ့ပါတယျ။
“သမီးတို့ myanmar idol season3ကွီး အောငျအောငျမွငျမွငျ နဲ့ ပီးဆုံးသှားပါပီ အရမျးလဲပြျောပါတယျ အလုံးကွီးတှလေဲကသြှားပါပီအကုနျလုံး
ဒါပမေဲ့ ၃ လလောကျ ဒီထဲမှာပဲသီခငျြးတိုကျ ထမငျးစား
ပြျောပါးခဲ့တော့ အခုကတြော့ ရငျထဲမှာ ဟာတာတာကွီးဖွဈရပါတယျ
ကို Phyo Myat Aung congratulations ဗြာ winner ကွီး သမီးအရမျးကွိုကျတဲ့သီခငျြးကို လကျဆောငျအဖွဈပေးလို့အရမျးပြျောတယျ
ပွုစုပြိုးထောငျပေးတဲ့ myanmar idol ကိုစီစဉျပေးတဲ့
သမီးကိုလဲတကယျ့သမီးလေးလိုသဘောထားပီးဒီလိုတှဆေိုတတျအောငျသငျကွားပေးတဲ့ အရမျးခဈြရတဲ့ တီခယျြ Tracy Yinmin Tin ရယျ ဆရာ Okka Oo Tha ရယျရော ကြေးဇူးမြားကွီးတငျပါတယျ အရမျးလဲခဈြပါတယျ
ပီးတော့ ဒီ top 11 ကိုဆှဲချေါလာပေးကွပီးတော့ တပတျနဲ့တပတျသမီးရဲ့အားနညျးခကျြလေးတှေ အားသာခကျြလေးတှကေို ဖွညျးဆီးပွောဆိုပေးတဲ့ ဒိုငျလေးဦးကိုလဲကြေးဇူးမမပေ့ါဘူး
အစစအရာရာ ဖေးမကူညီပေးတဲ့ ကိုAndy , ကိုဆိုငျး , ကို pink , မမေနှေငျး ( Sky Hnin Hnin , ကိုသနျ့ ( U U Thomas Thomas . သမီးကိုလဲအပွောအဆိုအနအေထိုငျသငျပေးခဲ့ကွတဲ့ ကို ဇေ ( Zeyar Minthiha ) ကို Sai , မ Chu Chu May Kyaw , မ ကေ , မ လဲ့ , မသကျစု , ကို ဘုနျးမွတျကြျော အစရှိတဲ့ PD တှအကုနျလုံးကိုလဲကြေးဇူးတငျပါတယျ သမီးကိုလှအောငျ မိတျကပျတှပွေငျပေးတဲ့ ဦးမောငျတို့အဖှဲ့ရော သမီးစိတျတိုငျးကဖြွဈအောငျအဝတျလေးတှဆေငျပေးတဲ့ judson ရော ကိုဝေ ကိုရော ကြေးဇူးမြားကွီးတငျပါတယျ
သမီးနမေကောငျးတဲ့အခြိနျမှာ အမွနျဆုံးသကျသာအောငျကုသပေးတဲ့ သူခကမ်ဘာဆေးရုံကဝနျထမျးအားလုံးနဲ့ ဆရာမကွီး Doc Thandar Cho နဲ့ ဆေးရုံအုပျကွီးကိုလဲကြေိးဇူးတငျပါတယျ
နောကျဆုံးအနနေဲ့ သမီးကို နရောတနရောရောကျအောငျ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတျကွီး ( မောငျတို့ ) ကိုကြေးဇူးမြားကွီးတငျပါတယျ
အမြားကွီးလဲခဈြပါတယျ သမီးကတော့အခုခြိနျမှာ အသံအိုးထိထားလို့ ဆရာဝနျကတော့ ၁လ လောကျနားရမယျပွောပါတယျ ၁ လလောကျနားပီးတာနဲ့ သမီး fan meeting လေးလဲတကျနိုငျသလောကျလုပျပါ့မယျ
သမီးသီခငျြးတှအေမြားကွီးဆကျလုပျသှားမှာပါ အားလုံးကိုကြေးဇူးဆပျတဲ့အနနေဲ့ သီခငျြးတှမြေားကွီးနဲ့ပွနျလာခဲ့ပါ့မယျ
ဒါနဲ့ ဒီနပေဲ့ဆေးရုံဆငျးပါပီ နကေောငျးသှားပါပီ
say u won’t let go ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ ‘Say You Won’t Let Go’ ဆိုတဲ့ သီခငျြးအပိုငျးအစလေးကို ကိုယျတိုငျတီးဆိုပွီး Video လေးတငျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ဒီလငျ့မှာ ကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုလေးရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူပွနျလာပွီး သီခငြျးသဈတှေ ဆကျလုပျမယျ့အခြိနျကို စောငျ့နကွေပါတယျ။ အမွနျဆုံးနကေောငျးကနျြးမာပါစေ မောငျခြိုရေ။